Music Mix Mobile သည် Sonnet ၏ Echo Express III-R နှင့် xMac mini Server နှင့်အတူတည်နေရာအသံဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်းအသွားအလာများကိုလွယ်ကူစေသည်။ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Sonnet ရဲ့: Echo Express ကို III ကို-R နှင့် xMac mini ကိုဆာဗာနှင့်အတူတွင်-တည်နေရာအသံမှတ်တမ်းတင် Workflows Music ကိုရောသမမိုဘိုင်း်
Sonnet ရဲ့: Echo Express ကို III ကို-R နှင့် xMac mini ကိုဆာဗာနှင့်အတူတွင်-တည်နေရာအသံမှတ်တမ်းတင် Workflows Music ကိုရောသမမိုဘိုင်း်
စီစဉျ-PCIe ကျစ်လစ်သိပ်သည်းနဲ့အိတ်ဆောင် Thunderbolt (TM) (R) ကဒ်ချဲ့စနစ်များအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်မှာအလုပ်လုပ်မှမိုဘိုင်းအသံထုတ်လုပ်သူဖွင့်ပေးခြင်း Sonnet ပစ္စည်းကိရိယာ၏ Array ကို Join
Irvine, ကာလီဖိုးနီးယား - ။ သြဂုတ်လ 20, 2014 - Music ကိုရောသမမိုဘိုင်း (M3), High-profile ကိုတိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေရေးဖြစ်ရပ်များနှင့်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်မိုဘိုင်းအသံအဆောက်အဦတစ်ခုသူဟာ Emmy (R) နှင့်ဂရမ်မီ (R) ဆုချီးမြှင့်-အနိုင်ရပံ့ပိုးပေး, Sonnet Technologies က '': Echo (TM) Express ကို III ကို-R နှင့် xMac ချထားလိုက်ပါတယ် ၎င်း၏မိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှုယူနစ် (TM) mini ကို Server ကို Thunderbolt (TM) စီစဉျ-PCIe (R) 2.0 တိုးချဲ့စနစ်များနှင့်ခရီးဆောင်ပျံသန်းဗူးစနစ်များကို။3အတွက် M2008 ရဲ့တည်ထောင်ကတည်းကအသုံးပြု Sonnet ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းအလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အရွယ်မှာအဆိုပါ: Echo Express ကို III ကို-R နှင့် xMac mini ကို Server ကိုကိုယ်ထည်ကမ်းလှမ်းမှုကို, သေး M3 ရဲ့သက်တမ်းတိုးရေးနှင့် streamlining ၏ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော, နည်းလမ်းများအပေါ်-တည်နေရာ audio ကလာရောက်ပူးပေါင်း မှတ်တမ်းတင်ခြင်း Workflows ။
မကြာသေးမီလများမှာတော့ M3 ပိုပြီးခရီးဆောင် MacBook Pro နှင့် (R) မှတ်စုစာအုပ်နဲ့ Mac (R) mini ကိုကွန်ပျူတာများမှအမွေကို Mac Pro ကို (R) တာဝါတိုင်ကနေက၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးအချို့ကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့သည်။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် M3 သူတို့တိုးချဲ့မှုပေမယ့်အခုတော့ဒီကြီးမားတဲ့, Mac Pros အတွက်သုံးလေ့ရှိသောခဲ့ high-performance ကို PCIe ကတ်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ဆက်လက်ရန်၎င်း၏အင်ဂျင်နီယာများကို enable မယ်လို့ဖြေရှင်းချက်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ သို့မဟုတ် Thunderbolt2သို့မဟုတ် Thunderbolt port များတပ်ဆင်ထားမဆို, Mac ကွန်ပျူတာ - - အဆိုပါ: Echo Express ကို III ကို-R ကိုအဆိုပါ MacBook Pros ဖွမူလကသာ Desktop ကွန်ပျူတာများအတွက်အသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ high-performance ကို PCIe ကဒ်များကျယ်ပြန့်မျိုးစုံနှင့်အတူ interface ဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူဖက်ရှင်မှာ xMac mini ကို Server ကိုလုံလုံခြုံခြုံနေဖြင့် ultra-သေးငယ်တဲ့-footprint ကိုသေးအစွမ်းထက်, Mac Mini ကို၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးပွားစေထိန်သိမ်း-mounting ကွန်ပျူတာနှင့်အတူတူပင်ဝင်းတွင်ပါရှိသောနှစ်ခု PCIe 2.0 တိုးချဲ့ slot နှစ်ခုမှ Thunderbolt ကနေတဆင့်ကဆက်သွယ်။
"သေးငယ်နှင့်ပိုပြီးခရီးဆောင်, Mac ကွန်ပျူတာများကိုပိုပြီးအစွမ်းထက်ဖြစ်လာကြပါပြီအမျှကျွန်တော်တို့ဟာယခင်ကအမွေ, Mac Pro ကို၏မြင်းကောင်ရေအားလိုအပ်ကြောင်းအများအပြားတာဝန်များကိုအဘို့ထိုသူတို့သုံးနိုငျသဘောပေါက်ပါတယ်," ယောလအဆိုတော်, M3 မှာပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့်နည်းပညာအင်ဂျင်နီယာကဆိုသည်။ "ဟုအဆိုပါ Sonnet တိုးချဲ့စနစ်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့ workflow နှင့်ထံမှ PCIe ကတ်များအပေါ်အားကိုးကြောင်းအသံဖြစ်စဉ်များကိုပြောင်းလဲရန်မလိုဘဲသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်းနှင့် MacBook Pro နှင့်နှင့် Mac Mini ကို၏ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်မှုမူတည်ပြီးနိုင်ပါတယ် လွန်စွာလိုလားသော, RME, Aja, Blackmagic ဒီဇိုင်းနှင့်အခြားစျေးသည်။ ကျနော်တို့ရုံ, ထို: Echo Express ကိုစကတ်များ pop Thunderbolt မှတဆင့် MacBook Pro နှင့်ရန်ကိုယ်ထည် connect, ကြှနျုပျတို့လုပ်ကိုင်ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။ ကွန်ပျူတာပြီးသား Thunderbolt ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူ xMac mini ကို Server ကိုကိုယ်ထည်အတွင်း၌တပ်ဆင်ထားသည်ကိုအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်, Mac Mini ကိုနှင့်အတူကပင်ပိုမိုလွယ်ကူပါတယ်။ "
M3 အဆိုပါ: Echo Express ကို Thunderbolt ချဲ့ထွင်မှုစနစ်နှင့်အစောပိုင်းက: Echo Express ကို Pro ကို Two-slot ကမော်ဒယ်နှင့်အတူစတင်, အသံဖမ်းထိုသို့လျှောက်ထားရန်ပထမဦးဆုံးသုံးစွဲဖို့ပထမဦးဆုံး Sonnet ဖောက်သည်အကြားခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့ M3 သည်၎င်း၏မိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှုယာဉ်များအားလုံးလေးခုအဖြစ်က၎င်း၏ခရီးဆောင်ရောစပ် / recording ကိုစနစ်များတစ်ဒါဇင်အတွက်: Echo Express ကို III ကို-R နှင့် xMac mini ကို Server များ install လုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, M3 အတော်ကြာ: Echo Express ကို Pros ကိုအသုံးပြုသည်အဖြစ် Sonnet ရဲ့ Tempo (TM) SSD ကို6Gb / sec SATA PCIe 2.5 လက်မအရွယ်သိုလှောင်မှုကတ်များနှင့် Allegro (TM) USB မှတ် 3.0 အိမ်ရှင် controller ကိုကတ်များ။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတှငျကြှနျုပျတို့မိုဘိုင်းအဖြစ်အပျက်မှတ်တမ်းတင်ဘို့လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ခရီးသွားလာ - ဒါကြောင့်ကျနော်တို့သုံးတဲ့ဖြေရှင်းချက်လုံးဝ, ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်သယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသောဖြစ်ရပါမယ်" ဟုအဆိုတော်ကဆက်ပြောသည်။ "ဒီအရည်အသွေးတွေအပြင်၌, Sonnet တိုးချဲ့ကိုယ်ထည်ချက်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသောနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Tech, သယ်အပေါ်အိတ်၏စုံတွဲတစ်တွဲနှင့်အတူလေယာဉ်၏ချွတ်လာတည်နေရာမှာရောက်လာပါ, အဲဒီနောက်မိနစ်တစ်ဦးအမှု၌အတူတကွအနေနဲ့အလွန်အမင်းယုံကြည်စိတ်ချရသောအရာနှင့်ကြီးစွာသော-မြည်အသံဖမ်းစနစ်အားသွင်းထားနိုင်ပါတယ်။ နညျးလမျးမြားစှာမှာ: Echo Express ကိုဖြေရှင်းချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်မိုဘိုင်းအသံဖမ်းတဲ့ခေတ်သစ်အတွက်ကဏ္ဍပြီ။ "
"US မှာအကြီးဆုံးဝေးလံသောအသံအဆောက်အဦကုမ္ပဏီအဖြစ်, M3 အလွန်တန်ဖိုးထားဖောက်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်မြင့် Thunderbolt တိုးချဲ့စနစ်များကိုအသံဖမ်း setting ကိုအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုဖြစ်တယ်," Greg LaPorte, ရောင်းအား၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားခဲ့သည်နှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, Sonnet Technologies က။ "M3 ရဲ့ Emmy- နှင့်ဂရမ်မီ-ဆုကို-အနိုင်ရတဲ့န်ထမ်းများသည်ကမ္ဘာ့အများဆုံးဂုဏ်သတင်းထုတ်လွှင့်ပွဲများနှင့်လူသိအများဆုံးဂီတပြုမူသောအမှုအခြို့သောမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ရန်နှစ်ပေါင်းများစွာ Sonnet ပစ္စည်းကိရိယာများကိုအသုံးပြုထားသည်။ ကုမ္ပဏီဖြစ်သော xMac Pro ကို Server ကိုတစ်ဦးထိန်သိမ်း-mount ဝင်းနှင့်အသစ်က Mac Pro များအတွက် Thunderbolt-to-PCIe 2.0 ချဲ့ထွင်မှုစနစ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လာမည့်ဖြေရှင်းနည်းများ, အချို့ကိုဖြန့်ချထားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်လက်လက်တွဲဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ "
Sonnet ထုတ်ကုန်အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.sonnettech.com.
သက်တမ်းကြာမိတ်ဆွေများကဆရာယောဟနျ Harris က, Mitch Maketansky, ယောလအဆိုတော်နှင့်ဂျေး Vicary 2008 ၏နွေဦး၌ဂီတရောသမမိုဘိုင်းဖွင့်လှစ်။ အဆိုပါလေးအသစ်တစ်ခု State-Of-The-Art မိုဘိုင်းမှတ်တမ်းတင်စက်ရုံသည် M3 နှင့်ပြည်နယ်-Of-The-Art ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ခေတ်မီဒီဇိုင်းအတွေးအခေါ်များကိုအသုံးပြုထားတဲ့ M1 ပျံသန်းမှု Pack ကိုစနစ်, အတူထူးခြားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ Music ကိုရောသမမိုဘိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများလုပ်ဆောင်ရမှာတွေနှင့်ဖောက်သည် '' မျှော်မှန်းချက်ထက်ကျော်လွန်ဆက်လက်ထားတဲ့ဖမ်းယူခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်သာလွန်အသံဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကတိကဝတ်များနှင့်ယုံကြည်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးရှည်တည်မြဲဆက်ဆံရေးဖန်တီးပြီးထိန်းသိမ်းနည်းကြိုးပမ်း။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် www.musicmixmobile.com.
Sonnet Technologies ကအကြောင်း
Sonnet Technologies က Inc ကဗီဒီယို, အသံအတွက်လိုလားသူအသုံးပြုသူများအတွက် Thunderbolt (TM) 2-to-PCIe (R) ကဒ်တိုးချဲ့စနစ်များ, လိုလားသူမီဒီယာစာဖတ်သူများ, RAID သိုလှောင်မှုစနစ်များနှင့်သိုလှောင်မှု, ကွန်ယက်နှင့်အခြားအင်တာဖေ့စကတ်များတစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူဖြစ်ပါသည် နှင့်ထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများ။ Sonnet ရဲ့ Thunderbolt တိုးချဲ့ထုတ်ကုန်လိုလားသူအသံ I / O နှင့် DSP ကတ်များလိုလားသူဗီဒီယိုရိုက်ခြင်းနှင့် transcoding ကတ်များ, ကွန်ယက်နှင့်သိုလှောင်မှု interface ကိုကတ်များနှင့် Thunderbolt နည်းပညာ-enabled ကွန်ပျူတာများနှင့်အတူအခြား high-performance ကို PCIe ကတ်များ၏အသုံးပြုမှုကို enable ။ နီးပါး 30 နှစ်ပေါင်း Sonnet ရှေ့ဆောင်နှင့် Mac (R), Window (R) နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်း-စံကွန်ပျူတာများ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဆက်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရန်ကြောင်းဆန်းသစ်နှင့်ဆုရထုတ်ကုန်စျေးကွက်မှယူဆောင်ခဲ့သည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.sonnettech.com.
IBC2014 မှာ Sonnet Technologies ကသွားရောက်ကြည့်ရှု, 7.G02 ရပ်
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/sonnet/sonnet-musicmixmobile.zip
အသံလွှင်း ပဲ့တင်သံ Express ကို Music ကိုရောသမမိုဘိုင်း Sonnet Technologies က သိုလှောင်ခြင်း xMac mini ကို Server ကို 2014-08-27
ယခင်: Nexidia နှင့် Telestream Nexidia QC စာတန်းထိုးအတည်ပြု Tool ကိုထဲသို့ Vantage လုပ်ငန်းအသွားအလာ Automation ပတ်ဝန်းကျင်၏ပေါင်းစည်းရေးကြေညာ
နောက်တစ်ခု: Motion-image နည်းပညာစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များရှစ်အဖွဲ့ဝင်များအပေါ် SMPTE ညီလာခံ '' Fellow '' အခြေအနေ